တစ်ခုချင်းစီကိုထောင်ပြီးပြည်နယ်တိုင်းပြည်များ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာတခုတခုအပေါ်မှာ indelible Imprint ချမှတ်ထားတဲ့ရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့သမိုင်း, ရှိပြီး, အင်ဒိုရာ ဤကိစ်စတှငျမပါချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကိုအနှစ်တထောင်၏ကျောင်းအုပ်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အစဉ်အလာများနှင့်အကောက်ခွန်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပိုင်နက်နှင့်လွတ်လပ်ရေး, ဒါပေမယ့်လည်းတချို့မူရင်းမသာမကယ်နိုင်ဘူး။
အတွက်မျက်စိဖမ်းမိသောပထမဦးဆုံးအရာ အင်ဒိုရာ - အစိုးရသည်၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံ: ပါလီမန်ခွင့်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာက, စိတ်တိုးပွားနှင့်မြေယာဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ရှောင်ရှားတစ်ခုသဘောတူညီချက်ပြင်သစ်၏အကဲအမှူးစပိန်ဆရာတော်-မှူးမတ် Co-သောမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း Andorrans လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တဖကျတှငျမူအင်ဒိုရာရှိသမျှတို့သည်အစောင့်အစွမ်းထက်အိမ်နီးချင်းများ၏ပခုံးပေါ် တင်. အခြားတစ်ဖက်တွင်, အင်ဒိုရာနှစ်စဉ်အစဉ်အလာတစ်ခု Co-အရွယ်မရောက်အခွန်ဆက်ရချေ: ပြင်သစ်သမ္မတ 960 ပြင်သစ်နှင့်စပိန်ဘိရှော့သည် 460 pesetas အပြင်, စတဲ့ကုန်စုံစတော့ရှယ်ယာ: ခေါင်းကိုဒိန်ခဲ၏ 12 ကိုအပိုင်းပိုင်း, Partridge နှင့် capons နဲ့6hams ။ 1993 ခုနှစ်တွင်ခြောက်သွေ့ရိက္ခာငွေပေးချေ၏အရေအတွက်ကဖျက်သိမ်းလိုက်ပေမယ့်အလယ်ခေတ်ခှဆိုတဲ့အချက်ကိုထားခဲ့တယ်။ သင်သည်အဘယ်မှာဤရာစုတှငျပြန်တွေ့လိုသလဲ?
အင်ဒိုရာအတွက်စကားမစပ်အပေါငျးတို့သအကြွေးတွေလျက်အခွန်ဆက်ရမယ့်အနှစ်တထောင်နေတဲ့ပတ္တူအိတ်၌ရှောက်သွားခဲ့ပြီ - လည်းအဟောင်းအစဉ်အလာ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်အဘယ်သို့, ကျောင်းအုပ်ကြီးအတွက်အရာမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြွေးတွေ (အခွန်နှင့်ဝန်ဆောင်ခ) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖို့အထူးနေ့ကရှိသေး၏။ မြို့သူမြို့သား (အသိုင်းအဝိုင်း) ၏ငွေပေးချေမှု၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကိုကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကိုကြွေးကြော်ဟာ Herald ဖြတ်သန်းတွင်, "စာအုပ်တွေပညာမဲ့ကြသည်!" ။ ဤအရက်ကျော်နေပြီပမာဏကိုနေ့စဉ်ဒဏ်ငွေစုဆောင်းထားတဲ့ချော, ပြုရန်တွန်းအားပေးခြင်းမရှိဘဲလက်ခံခဲ့မည်မဟုတ်ပါဆိုလိုသည်။
ဒါဟာအင်ဒိုရာ၏မြို့သားယုံကြည်နေသည် - အလွန်လျောက်ပတ်နှင့်ဘာသာရေး။ ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များကိုအတူတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့နိုင်ငံက, အဥပဒေပြဌာန်းသစ်တောပြုန်းတီးမှုတားဆီးမထားဘူး။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သမိုင်းကြောင်းအရ, မည်သည့်နိုင်ငံသား, သူလိုအပ်အဖြစ်နည်းတူအများကြီးခုတ်လှဲခြင်း, တော့ဘူးမျှသစ်သား။ Andorrans မဟုတ်ရင်သူတို့ Kara-သခင်ဘုရားကိုမှီလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အင်ဒိုရာမှောင်ခိုတစ်ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်ပိုပြီးဘာလဲ - ကဥပဒေဖြင့်ပင်အားပေးအားမြှောက်အချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်တားမြစ်သည်မပေးပါ။ အကောက်ခွန်သာတရားဝင်အဘယ်သူမျှမအလိုတော်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယရှာဖွေနေ, စာရွက်စာတမ်းများ check လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကစပိနျသို့မဟုတ်ပြင်သစ်အကောက်ခွန်နှင့်အတူခိုးနှင့်အပြစ်ပေးဖို့နဲ့သေချာအဘယ်သူမျှမအလိုတော်ထိုသို့ရွေးဖို့, ကုန်စည်နှင့်ထုတ်ကုန်များပိုလျှံအချို့ကိုယူစီမံခန့်ခွဲလျှင်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးစစ်တပ်၏ Co-သောမင်းတို့၏အသွင်အပြင်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်ကတည်းက။ အင်ဒိုရာထိုကဲ့သို့သောစစ်မှုထမ်းများနှင့်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီနေရာဒေသအတွက်အကောင်းဆုံးလူငယ်များသည်အဘယ်သူ၏မစ်ရှင်သေနတ်ကနေပုံမှန်ဧည့်သည်များ volley ကြိုဆိုအမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့သို့ဝင်စဉ်အလာဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူအင်ဒိုရာအတွက်တစ်ချိန်တည်းနှစ်ပတ်လည်ဗြာဆနျဆ troubadour ယှဉ်ပြိုင်ကျင်းပရန်အစဉ်အလာကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖျော်ဖြေပွဲများစွာသောအခြားရိုးရာကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ ပွဲတော်များ : ရှေးခေတ်ဝတ်စုံ, ဒီလက်နက်, နိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ် paraphernalia ၌တည်၏။ တိုင်းနေထိုင်သူငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကProvençalကဗျာကိုလညျးတတျကြှမျးနှင့်သူမ၏ရိုသေ။
အဆိုပါ Highlander သော်လည်းပြင်းထန်အလွန်ကိုင်းရှိုင်းခြင်းနှင့်စှဲခြှတော, ဒါပေမယ့်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ဧညျ့လူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်ထိုသို့မနာပါဘူး သူတို့ကချက်ချင်းမသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့အခြေအနေနှင့်အဆင့်အတန်း၏အရွယ်အစား၏, ဖီဆန်နှင့်အများပြည်သူအမိန့်တစ်ခုအလေးအနက်ဖောက်ဖျက်အတွက်တိုင်းပြည်ကနေသင်တို့ကိုထုတ်ပယ်။ စကားမစပ်, အင်ဒိုရာအတွက်တင်းကျပ်သောကက်သလစ်ထုံးတမ်းစဉ်လာစောင့်ကြည့် striptease, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုပိတ်ပင်ခဲ့။ နှင့်လူနည်းစုများ၏အမြိုးမြိုးမှာရှိသမျှကိုမြင်ရမခံခဲ့ရပါ။
ဌာနေဒေသခံများကာတာလတောင်သူလယ်သမားများ၏သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကကာတာလနဲ့ရှေစကားပျံ့နှံ့နေတဲ့အပြင်, တောင်တော်ချိုင့်ထဲမှာအခြေချရန်ဆက်လက်။ Culturologists အင်ဒိုရာအချင်းချင်းနားမှာငြိမ်းချမ်းစွာခြမ်းတရာတစ်ဦးအကြောင်းကိုလူမျိုးစုများမှအိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်နည်းပညာကိုလုံခြုံစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများ၏အစဉ်အလာနှင့်အတူအတူတကွကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကယုံကြည်ကြသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ
ဆွီဒင် - ဂူ
Trichomonas - လက္ခဏာများ
အဆိုပါအမြီးအမောက်: ဂျီ, Carr က, Spock နှင့်အခြားသူများ "တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှညာဘက်" ကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ရငျဆိုငျခဲ့ကြဘူး!
အနီရောင်ချယ်ရီ - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Grudnichok မကြာခဏ regurgitates
အဖေများအတွက် Babysitting:9ကြယ်ပွင့်ခင်ပွန်း၏မိမိတို့၏သားသမီးများ၏ပညာရေးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်!
16 ညဦးယံအချိန်လုပ်-Up သင်ခန်းစာများ